AKHRISO: Gudoomiyaha G Banaadir oo ku dhawaaqay guddiga Furida Wadooyinka Muqdisho
MUQDISHO(P-TIMES) – Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud (Filish) ayaa caawa soo saaray wareegto uu ku magacaabayo guddiga dibu furista wadooyinka caasumada Soomaaliya oo mudo dheer xirnaa, ka dib markii ay dawladdu go’aamisay in la xiro si loo sugo ammaanka magaalada.
Gudoomiyaha ayaa balan-qaaday furida wadooyinkan, markii uu la wareegayay xilka, waxaana uu sheegay in uu dibu eegis dhamaan ku sameyn doonaan sababaha ay ku xiran yihiin Wadooyinka muhiimka ah ee caasumada Soomaaliya.
Guddiga uu magacaabay Gudoomiye Cumar Filish, waxaa Gudoomiye loo dhigay Kuxigeenka xagga Ammaanka iyo Siyaasadda ee Maxamed Tuulax, iyadoo ay soo kormeeri doonaan goobaha xiran, ayna warbixin kusoo celin doonaan Gudoomiyaha.
Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa 29 bisha August 2019 balan qaaday in uu dib u furi doono wadooyinka Muqdisho kuyaala ee xiran.
Guddigan, waxaa xubno ah Saraakiil ciidan oo sannadyadii u dambeeyey ka madax banaanaa howlaha maamulka gobalka Banaadir iyo Taliyaha ciidamada Booliska ee gobalka Banaadir, iyadoo ay sidaas oo kale ku jiraan kuxigeenada Gudoomiyaha qaar kamid ah.